[YEPAMUTEMO] Mac iPhone Data Recovery: Recovery dzadzimwa iPhone Data musi Mac
Wenyika 1st Mac iPhone uye iPad date kupora software.
Kupora iPhone mashoko pamusoro Mac pamwe nhatu.
Kwanisa kudzorerazve neshamwari, SMS, anoti, kufona matanda, mapikicha, video, etc.
Kunoenderana azvino iPhone uye Mac Os.
Edza It Free Edza It Free App Download
dr.fone Toolkit - iPhone Data kupora (Mac) ndiye simba uye kunobatsira Mac vanoshandisa dzosa yakarasika iPhone Data.
Netsaona dzadzimwa chinhu chinokosha pamusoro iPhone wako? Kurasika kana akaputsa iPhone wako? Haufaniri hako kutya! dr.fone Toolkit (Mac), wako Mac iPhone date kupora nyanzvi, ari pano kukubatsira adzikunure Data zvinokosha kuti iwe wakafunga akanga zvachose akarasika.
For Zvinozivikanwa Different
This Mac iPhone Data kupora Software anoshandira zhinji zvakafanana apa.
Data vakarasika pashure fekitari dzosera
Data akarasikirwa nokuda iOS update
Mudziyo rakakiyiwa kana Forgot Password
All pamusoro Features
Unokwanisa kushandisa ichi Mac iPhone date kupora kuti atarise zvose dzadzimwa kana varasikirwa mashoko enyu iPhone, iPad kana iPod touch, uye vaone zvakadzama pachena.
Uchida kudhanilodha uye buritsa iCloud negadziriro yeparutivi faira? Izvi iPhone date kupora Software nokuda Mac anorega iwe kuzviitira free. Edza uye imi muchaziva nayo.
Tose tinoziva kuti Apple haabvumiri vanhu kuverenga zviri iTunes negadziriro yeparutivi faira, apo ichi Mac iPhone Data kupora Software anoita, uye zviri pachena.
Zviri zvinopfuura Mac iPhone Data kupora chokushandisa. Kana ukaona mashoko ako Ongororo mugumisiro, unogona zvakananga kufanoziva uye kudhinda kugutsikana kana uine kudiwa zvakadaro. Chinhu chimwe-watinya basa.
Izvi iPhone date kupora Software nokuda Mac inoita kuti apore mashoko akafanana neshamwari, mashoko, mapikicha, anoti, dana nhoroondo, zviyeuchidzo, WhatsApp mashoko, uye zvakawanda, kusvika 18 faira mhando.
Hazvinei uri kushandisa ichangobva iPhone 7, iPad Pro, kana yakare iPhone 4, iPad 1, ichi Mac iPhone date kupora inowirirana zvakazara mienzaniso yose iPhone, iPad uye iPod touch.
Izvi iPhone date kupora Software nokuda Mac rinoverengwa-chete zvachose software. harizovi kuchengeta, kuchinja kana achigarira maoko chero mashoko ari mudziyo wako kana ari ndipo pachinobatsirawo faira. Tinotora zvako pachako mashoko uye nhoroondo zvakakomba. nguva dzose uri munhu chete anogona kuwana nayo.
3 Mac iPhone Data Recovery Nzira
Zvakananga tarisei iPhone wako uyu Mac iPhone date kupora Software kufanoziva uye achapora dzadzimwa Data zvokusarudza.
Exract kufanoziva uye zvokusarudza achapora zvaunoda kubva iTunes dzenyu negadziriro yeparutivi mafaira pamusoro Mac.
Download uye kusvina iCloud wako negadziriro yeparutivi faira kufanoziva uye zvokusarudza achapora chero chinhu chaunoda kubva.
More iyi Mac iPhone Data Recovery Software
Preview Available: Usati kupora, unogona kutoziva mifananidzo, mavhidhiyo, mashoko, neshamwari, anoti, etc.
Zvichienderana Recovery: Kuwanazve zvose kana zvimwe zvinhu iripo. You kusarudza izvozvo.
Data Back kuti mudziyo: Pakarepo kuponesa akapora mashoko pamusoro iPhone wako pasina overwriting huripo mashoko.
100% Safe Guarantee: A Verengai-chete Mac iPhone date kupora mudziyo, haizorambi kana kushandura chinhu iPhone wako.
Nyore Kushandisa: No unyanzvi kombiyuta akabvunza, munhu wose anogona kushandisa iri iPhone Data kupora Software nokuda Mac.
iPhone Complete kugarisana
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac Os X 10.11 (El Captain), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, kana 10.6
iPhone Data Recovery nokuda Mac
How kuwanazve Call History musi iPhone (iPhone 6s Plus / 6s Included)
How wokugadzirisa dzadzimwa mapikicha kubva iPhone (iPhone 6s Plus Included)
How kuwanazve dzadzimwa Video musi iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4S / 4
Sei dzosa WhatsApp Messages musi iPhone 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS
How kuwanazve Lost kana dzadzimwa iPhone Contacts
How wokugadzirisa iMessages kubva iPhone (iPhone 6s Plus Included)